Nwere ike nduku dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > White nduku oriri na-edozi - ịza ajụjụ ndị ahụ
Nwere ike nduku dị mma?
Dị kaọcha nduku, n'eziokwu, larịị, ọkarandukunwere ike inye aka na nha / mmezi.Ndukubụ ezigbo ụzọ maka vitamin C na B6, ezigbo isi iyi maka eriri (nke na - eme ka afọ ju gị afọ) na manganese, NA ha nwere potassium karịa unere!
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ele akwụkwọ nri anya dị ka ihe dị mma, poteto emeela ọtụtụ esemokwu. N'ihi na ha starch ọdịnaya, ọtụtụ ndị kwenyere na ha kwesịrị ịbelata oriri ha. Ọzọkwa, a na-ejikọkarị poteto na nri eghe na nke esichara site n’inweta isi ala ya, poteto ọ dị mma ma ọ bụ dị njọ maka anyị? E nwere ọtụtụ ụdị poteto nwere ụkpụrụ dị iche iche na-edozi ahụ, mana n'ozuzu, poteto nwere otu ihe dị otu gram 170, gụnyere anụ na anụ, na-enye calorie 168, enweghị abụba, gram ise nke protein, gram 37 nke carbohydrates, anọ n’ime ha bụ eriri, nanị ntakịrị bit nke sodium, na ezigbo ọrụ RDI maka vitamin C, B6, posassium na manganese.
Ugbu a, nduku bụkwa isi iyi nke antioxidants ndị a kwenyere na-ebelata ụmụ irighiri ihe na-abawanye n’ime ahụ gị ma na-eso akpata ọrịa na-adịghị ala ala. Cheta otu esi akwadebe poteto gi ihichapu nduku nwere ike wepu ihe di mkpa n’ime eriri na mineral nke di n’ime peel. Ọzọkwa, ighe poteto nwere ike ime ka abụba ha na calorie dịkwuo elu ma e jiri ya tụnyere ụzọ esi esi nri ndị ọzọ dị ka mmiri ma ọ bụ isi nri.
Na-eguzogide ọgwụ stachi. Ihe na-eguzogide ọgwụ bụ ụdị stachi na-adịghị agbari na eriri afọ. Kama, ọ na-aga ozugbo na eriri afọ, ebe ọ nwere ike inye nri nje bara uru na eriri afọ gị.
Nduku bụ ezigbo ihe na-esi na starch emechi emechi, ndị ahụ esiri ya wee jụrụ oyi nwere ọtụtụ ya. Ejikọtara stachi na-eguzogide ọgwụ na ọtụtụ uru ahụike, ọkachasị ndị metụtara njikwa shuga na ọbara na insulin. N’otu nnyocha, mmadụ iri n’ime ha riri gram 30 nke stachi na-eguzogide ọgwụ kwa ụbọchị ruo ọnwa anọ.
Ha chọpụtara na stachi starchite mụbara mmetụta insulin site na 33%. N’ọmụmụ ihe ọzọ, mmadụ iri n’ime ha were gram 50 nke stachi nduku n’ọkụ. Ha nwere belatara shuga shuga shuga na enwewanye mmetụta nke afọ ojuju na afọ ojuju.
A pụkwara ijikọta stachi na-eguzogide ọgwụ na ọtụtụ uru ahụike ọzọ, gụnyere ịba ụba nri na-edozi ahụ, ahụike dị mma, na mbelata nduku nwere ike ijuju. A maara nduku dị ka otu n'ime nri na-ejuputa nri. Maka nke a, ha nwere ike inye aka belata nri gị.
Nnyocha na-egosi na poteto esiri esi nwere oke afọ ojuju, na-eme ka anyị nwee afọ ojuju. Ha na-ejupụta karịa nri ndị ọzọ dị elu dị ka osikapa na pasta. na okpukpu asaa na-ejuputa karịa croissants.
Akụkụ nke nduku na-enwekwa ezigbo eriri, nke ga-eji nwayọ na-agagharị na usoro nsị ma nwee ike inyere anyị aka inwe afọ ojuju. Nduku, Mbara ibu ibu, na Glycoalkaloids. Studiesfọdụ ọmụmụ nwere ezigbo mkpakọrịta dị n'etiti ụfọdụ ụdị poteto na ngwaahịa na nduku na uru bara uru.
Nke a bụ ihe kpatara mgbagwoju anya banyere mmetụta ahụike nke nduku om. Productsfọdụ ihe e ji esi nri, dị ka french na poteto ibe ma ọ bụ ibe, nwere calorie na abụba karịa sie, sie, ma ọ bụ potato a roara n'ọkụ. Cheta, n'agbanyeghị nri nri, calorie karịrị nwere ike ibute uru bara ụba.
Mgbe ejiri ya na-eri oke na otu akụkụ nke nri kwesịrị ekwesị, poteto niile anaghị edozi agaghị enwe ike ibute uru. Enwekwara nchegbu banyere ezinụlọ nwere ike ịdị na-egbu egbu nke ogige ndị a na-akpọ glycoalkaloids. Ha na - eme molecule a na - akpọ chlorophyll, nke na - eme ka ha dị ndụ.
Ọfọn, ikpughe ọkụ nwere ike ime ka ịba ụba nke glycoalkaloids, nke nwere ike nsị na oke dị elu. Ka o sina dị, glycoalkaloids, mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, enweghi ike inwe mmetụta na-adịghị mma. 2005 ọmụmụ ahụ nyere ndị na-etinye poteto na ngụkọta glycoalkaloid nke mkpokọta 20 milligrams kwa 100 gram nke nduku, nke bụ oke elu a nabatara maka nchekwa, ha ahụghịkwa mmetụta ọjọọ ọ bụla.
N'ụzọ bụ isi, glycoalkaloids abụghị ihe ọ bụla na-echegbu onwe ya. Kpachara anya chekwaa poteto gị na obere okpomọkụ na ebe gbara ọchịchịrị, dị mma maka gị, ịghara ịkọ ọnụ ma dịkwa ụtọ. Ime achịcha, esi mmiri ọkụ, na ịmị ọkụ ọkụ bụ nhọrọ kachasị mma maka ịbelata ọdịnaya ha na calorie ma e jiri ya tụnyere frying ma ọ bụ iri nri ratụ ratụ dị ka french fries ma ọ bụ poteto ibe.
Erila poteto mgbe ha mere agadi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Daalụ maka ile anya. Nye mkpịsị aka aka edemede a ma ọ bụrụ na ịchọtara ya bara uru, echefukwala ịdenye aha na YouTube Nutrition Authority Nutrition site na ịpị bọtịnụ uhie n'okpuru isiokwu a. (egwu na-ewuli elu)
Kedu ihe oriri na-edozi ahụ nke nduku ọcha?
Otu ọkara-sizednduku ọchanwere ihe dị ka 110kalori, Gram carbohydrate 26, gram atọ nke eriri abụọ na gram atọ nkeprotein, na enweghikwa abụba na cholesterol. Banyere vitamin na mineral,ọcha ndukujuputara na vitamin C, B6, niacin, folate, potassium, manganese, magnesium na phosphorus.Ọnwa Ise 14, 2021
Gịnị mere na ị gaghị eri ọcha nduku?
Ma okwu ịdọ aka ná ntị: “Na-enweghị akpụkpọọcha ndukunwere ezigbo glycemic index - nke pụtara na ha na-eweli ọbara shuga gị ọsọ ọsọ, ”ka Kate Patton, MEd, RD, CSSD, LD na-ekwu. Dabere na iheị na-eri nriya na akpukpo arunduku ọcha,gịnwere ike ịdaba na mberede ọbara ọgbụgba ma daa n'ike n'ike.Ọgọst 9, 2018
Nduku ocha bu ndi ojoo?
Ndukua na-ahụta akwụkwọ nri starchy na ahụikekabu. Ha dị elu na eriri (mgbe gụnyere anụ ahụ), obere calorie, ma gụnye vitamin na mineral.
Kedu ka starch si dịnduku?
butererusset nduku Ogbe 111
ngwa ngwanduku 87
sienduku ọcha 82 (nkezi)
Nduku ọ dị mma karịa osikapa?
Ihe omuma a chikotara na-eduga anyi na nkwubi okwu naosikapa, karịsịa agba aja aja ma ọ bụ ụdị parboiled (ọcha na-agbakwunye nri) bụ nhọrọ ka mmakarịa ndukuekele maka ọdịnaya vitamin ya dị elu na ndepụta glycemic dị ala.Ọkt 28, 2015
Kedu poteto kachasị mma?
Ihe niilendukuụdị dị iche iche dị elu na carbohydrates ma nwee oke ume nke calorie yana ọtụtụ eriri dị mma, vitamin na mineral. Ofdịndukunke ahụ nwere ike ịbụahụikebụ ndị nwere anụ ahụ na-acha oji, dị ka Purple Viking, Yukon Gold na Ruby Crescent.Ọnwa Ise 9, 2019
Kedu nke na-acha ọcha ọcha ma ọ bụ poteto ụtọ?
Potatoestọ ndukuna-ekwukarị na ọ bụahụikekarịaọcha nduku, ma n’eziokwu, ụdị abụọ ahụ pụrụ ịba nnọọ uru. Mgbe niile naụtọ ndukuenwere ike iji calorie, protein, na ọdịnaya carb,ọcha ndukunyekwuo potassium, ebeụtọ ndukunwere nnukwu vitamin A.Ọnwa Ise 13, 2019
almond butter dị oke ọnụ
Nduku ocha ha adi onwu?
Akwụkwọ nri Nightshade
Akwa, ose, tomato nandukuha niile bụ ndị otu ezinụlọ Akwụkwọ nri ndị a nwere kemikal solanine, nke ụfọdụ mmadụ na - ekwu na - akpata ọrịa ogbu na nkwonkwo nambufụt.
Kedu ihe bụ nduku kasị sie ike?
IheAhụ ike Ndukubụ UhieNduku
Mgbe ị tụlechara njupụta ịnweta, vitamin njupụta, nguzo na-edozi ahụ, usoro shuga-na-fiber, usoro sodium-na-potassium, na profaịlụ phytochemical, ọbara ọbarandukubụnduku kasị sie ikenwere data site na USDA Food database.Ọnwa Ise 28, 2018
Kedu ụdị ụdị nduku kachasị mma?
Iheụdị ndukunke ahụ nwere ike ịbụahụikebụ ndị nwere anụ ahụ na-acha oji, dị ka Purple Viking, Yukon Gold na Ruby Crescent. Pigments na ndị andukunye flavonoids na carotenoids nke na-akwalite ezi ahụ ike.Ọnwa Ise 9, 2019
Ndi poteto ka ahụike karịa pasta?
N'ụdị, asacha, ma ọ bụ sie,ndukun'ezie na-enyekwu ike na-enyefe mgbagwoju carbohydrateskarịaotu iko nkeonyinye. Varietiesdị nile - russet, uhie, odo, odo odo, na ụtọ - nwere nnukwu vitamin na mineral. Na mgbakwunye, ha dị mfe igwu ma kwadebe.Ọgọst 2, 2007
Gịnị bụ ekwukwa n'akwụkwọ uru nke na-acha ọcha nduku?
1 White Potato Nutrition Eziokwu. Nduku bu ezigbo uzo nke otutu vitamin na mineral, gbakwunye nye phytochemicals na faiba (karia ikpa). 2 Nduku na Ibu Ibu. Otu nchegbu banyere nduku bụ dịtụ elu ego nke ngwa ngwa gbarie carbohydrate (stachi). 3 Njikọ dị n’etiti nduku na ahụike obi.
Ego ole sodium dị na nduku ọcha?
Ego ole sodium dị na nduku ọcha: Ego ole ka potassium dị na White nduku? Ọnụ ọgụgụ nke potassium na White nduku: Olee otú ọtụtụ ndị na carbs nọ na White nduku?
Carbs ole dị na nduku ọcha?
Nri ọcha nduku: calorie ole dị na nduku? 1 130 calorie. 2 4 g protein. 3 0 g ngụkọta abụba. 4 kab dị 37 37. 5 4 g eriri. 6 2 g shuga. 7 2 g ígwè. 8 magnesium mg 48. 9 926 mg potassium. 10 121 mg site.